Araka ny asehon'ny fanazavana ara-pitsaboana, mihoatra ny antsasaky ny ratra rehetra amin'ny rafi-pitiliana ny aretin-kozatra dia mifandray amin'ny fahasimban'ny lohalika. Ny fikambanan'ny lohataona mifandray amin'ny femora, tibia ary patella no singa faharoa lehibe indrindra amin'ny vatana. Izy io dia hita taratra eny ambonin'ny etona, izay manazava ny fahasimbana matetika.
Ny voka-dratsin'ny ankapobeny dia mifandraika amin'ny fatoran'ny ligaments na meniscus, izay mahazatra indrindra amin'ny atleta. Na ny ratra madinidinika amin'ny ankapobeny aza dia miteraka fahakiviana, fanaintainana ary fihenan'ny mouvement. Ny voka-dratsy lehibe kokoa amin'ny tsy fisian'ny fitsaboana ara-potoana sy ara-dalàna dia mety hiteraka fahasembanana sy fahasembanana.
Rahoviana no ilaina ny fanatanjahantena amin'ny lohalika?
Ny filazalazana momba ny fandinihan'ny ultrasound ny lohalika dia ny fahitana na ahiahiana amin'ireto manaraka ireto:
fahasamihafàna sy mangana maro isan-karazany;
pifandiam-bolo eo amin'ny lohalika;
fahasimbana eo amin'ny fehiloha sy ny ligaments, menisci ;
Ny tabataba amin'ny taolana izay mamorona ny lohalika, sns.
Inona no asehon'ny tara-pahazavan'ny lohalika?
Alohan'ny hametrahana fepetra fitsaboana ho an'ny fahasimban'ny lohalika, zava-dehibe ny mametraka ny atao hoe diagnostika marina. Amin'ny ankapobeny dia tsy ampy ny fanangonana anamnesis sy ny fanandramana ivelany ny lohalika. Amin'ny lafiny iray, matetika ny presbytera no ampiasain'ny lohalika, izay ahafahana mamantatra ny fizotry ny aretina amin'ny karazam-bolo rehetra amin'ny fotoana, na alohan'ny fisehoan'ny soritr'aretina marary mafy aza.
Amin'ny fikarohana momba ny firaisana amin'ny lohalika dia noheverina fa:
ny fisian'ny fluid amin'ny fiaraha-miasa;
ny hateviny sy ny hatsaran'ny kalitao sy ny taolana;
ny toe-batan'ny ligamentsa anatiny sy ivelany ary ny tranokala marevaka hafa izay misy ao anatin'io lavaka mitambatra io, sy any ivelany, akaikin'ny fikambanana, sns.
Ultrasound, MRI na x-ray amin'ny fiaraha-monina - iza no tsara kokoa?
Ny fampitahana ireo fomba maro samihafa momba ny aretina ny lohalika, indrindra fa ny MRI, ray sy rhine ary ny ultrasound, dia ilaina ny manamarika ireo tombony amin'ny ultrasound. Ny fahafahan'ny aretina ultrasound mifandray amin'ny rafitry ny musculoskeletal dia tsy ambany noho ny fakana sary amin'ny alàlan'ny magnetic resonance, fa ny ultrasound kosa dia tsotra kokoa amin'ny famonoana ary ho mora kokoa amin'ny marary.
Ny fandinihan-draharaha amin'ny rétinée dia manana ny tsy fahampian-tsakafo noho ny antony mahatonga ny sary rosia mamela antsika hanombantombana ny taolana fotsiny ihany. Ary ny teboka malefaka eo amin'ny lohalika (meniscus, capsule joint, tendons, ligaments, sns) dia tsy azo jerena amin'ny fanampian'ny rétm.
Ny marimaritra iraisana koa dia ny fahafahana mamantatra ny saka amin'ny taolam-paty "ultrasound", izay tsy hita amin'ny radiographie. Amin'ity fanontaniana ity, ny ambaratonga ambony dia manaloka ny fahamarinan'ny aretina MRI. Noho izany, ny ultrasound amin'ny lohalika dia ny fomba fitsaboana faran'izay fampahalalana sy mora azo indrindra.
Ahoana ny firafitry ny lohalika?
Ny teknika amin'ny fanatanterahana ny hodi-doha amin'ny lohalika (ligaments, meniscus, sns.) Dia midika ho fanombanana sy fampitahana ny ankavanana sy ankavia amin'ny ankapobeny. Ny marary dia eo amina toerana ambony miaraka amin'ny rola napetraka eo ambany lohalika. Voalohany, nodinihina ny sisin-damosina sy ny sisiny, ary avy eo dia mihodina ny kibony ny marary ary mandinika ny sisiny aoriana.
Ny fahafahan'ny fandinihana amin'ny ankapobeny ny ankavian'ny lohalika (simba sy salama) dia ahafahana manalavitra ny fanodinkodinana diso na ny tsy fahampian-tsakafo amin'ireo fanovana hita.
Lasa marefo ny fototry ny lymphs amin'ny tendany - inona no tokony ataoko?
Ny homamiadan'ny kansera - ny soritr'aretina voalohany
Osteoarthritis - soritr'aretina
Fanafihan'ny pancreatitis - soritr'aretina
Ahoana no hanasitranana skelose maromaro?
Ahoana no fomba fikarakarana vovony maina amin'ny olon-dehibe?
Ahoana no hampitombo ny hemoglobine ao an-trano?
Ny vitrana grilyato - fomba fampiharana hevitra vaovao ao anaty aterineto?
Monica Bellucci sy Telman Ismailov
Ahoana no hialana amin'ny eritreritra ratsy?
Nahoana no nofinofy menaka?
Akanjo hoditra ho an'ny fararano
Ny fitsaboana ny lalan-drà varikose
Ny akanjon'ny vehivavy ho an'ny fampakaram-bady
Yarrow mahazatra - fampiharana amin'ny fitsaboana sy ny cosmetology
Matoantenin 'ny roa ampahatelony
Mandravaka amin'ny tanimanga
Mila pasipaoro ho an'i Abkhazia ve aho?
Accessories ho an'ny akanjo mavo
Ny ririnina ho an'ny vehivavy dia Adidas